Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ)
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Khin Yin Kyay ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
ဆုံဆို့နာရောဂါဆိုတာ သင့်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ အချွဲအမြှေးပါးတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ပြီး ဆိုးဝါးတဲ့ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒီဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းနဲ့ လည်ချောင်းမှာရှိတဲ့ တစ်ရှူး အသားမျှင်တွေကို ဖျက်ဆီးစေတဲ့ အဆိပ်ကိုထုတ် ပေးပြီး ရောဂါခံစားရစေပါတယ်။
ဆုံဆို့နာရောဂါ ကိုကာကွယ်ဖို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆုံဆို့နာရောဂါဟာ US နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေမှာ ဖြစ်တာအလွန်ရှားပါးနေပါပြီ။ သို့သော် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှု နည်းနေ သေးတဲ့အတွက် ဖြစ်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆုံဆို့နာရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးဟာ ခန္ဓါကိုယ်ထဲက
ဘယ်အသားအမျှင်ကိုမဆို တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။ လည်ချောင်းနဲ့ ပါးစပ်မှာတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သိသိသာသာ အခံစားရဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုံဆို့နာရောဂါရဲ့ အဖြစ်များဆုံး ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
• သင့်လည်ချောင်းဟာ မီးခိုးရောင် အမြှေးပါးထူထူနဲ့ အုပ်ခြင်းခံရခြင်း၊
• လည်ချောင်းနာပြီး အသံဝင်ခြင်း၊
• လည်ပင်းမှ ဂလင်းများ ရောင်ရမ်း၍ ဖောင်းလာခြင်း၊
• အသက်ရှုရာ၊ အစာမြိုချရမှာ ခက်ခဲလာခြင်း၊ ကိုယ်လက်မ
• နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊
• ချမ်းတုန်၍ဖျားခြင်း၊ အသားအရေ ပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်လာခြင်း၊
• ကျယ်လောင်၍ အားပြင်းစွာချောင်းဆိုးခြင်း၊
• သက်တောင့် သက်သာ မရှိပဲ နေထိုင် မကောင်းဖြစ်ခြင်း၊
• စကားပြော ပီသမှုမရှိခြင်း၊
• သွေးလန့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အရေပြားအရောင်ဖျော့၍ အေးစက်လာခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းနှင့်
• နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်း စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင်(သို့) သင့်ကလေးဟာ ဆုံဆို့နာရောဂါ ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ၊ အနားမှာနေမိတဲ့အခါ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်(သို့)သင့်ကလေးဟာ ဆုံဆို့နာရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မထိုးရသေးဘူးဆိုရင် တက်နိုင်သမျှ အစောဆုံး သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
၎င်းရောဂါဟာ Corynebacterium လိုခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး လေမှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပိုးရှိနေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေက တစ်ဆင့်လည်း ကူးစက် နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းက တစ်ဆင့်လေထဲမှာ ပိုးတွေရောက်သွားပြီး ဒီလေကိုသင်ရှု ရှိုက်မိတဲ့အခါ ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကို သွားတဲ့အခါ ဒီရောဂါကူးစက် ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ရောဂါပိုး ရှိသူရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို သင်ကိုင်တွယ်မိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာဒီလူရဲ့ သုံးပြီးသား တစ်ရှူးကို ကိုင်တွယ်မိခြင်း၊ သောက်ပြီးသား ဖန်ခွက်ကို မဆေးပဲ သောက်မိခြင်း( သို့) သူရဲ့ပိုးရှိနေတဲ့ အခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကို သေချာကိုင်တွယ်မိခြင်း စတာတွေကြောင့်လည်း ဆုံဆို့နာရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အရမ်းရှားပါးတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ တဘက်( သို့) အရုပ်လိုမျိုး အိမ်သုံးပစ္စည်း ကစားစရာတွေမှာလည်း ဆုံဆို့နာပိုးက ပြန့်နေတတ်ပါတယ်။
ဆုံဆို့နာ ပိုးဝင်နေတဲ့အနာကို ကိုင်တွယ်မိရင်လည်း ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးက သင့်ဆီကူးလာနိုင်ပါတယ်။
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
• ကာကွယ်ဆေးအချိန်မှန် ထိုးမှုမရှိခြင်း
• ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော နိုင်ငံသို့ခရီးသွားခြင်း
• AIDS ကဲ့သို့ ခုခံအားကျရောဂါရှိခြင်း
• သန့်ရှင်းမှုမရှိ၍ လူနေထူထပ်သောနေရာ များတွင်နေထိုင်ခြင်း
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါ ဟုတ်မဟုတ် အဖြေရှာရန်အတွက် ဆရာဝန်ကသင့်ရဲ့လည်ပင်းကဖောင်းနေတဲ့ ပြန်ရည်ကြော အလုံးအကျိတ်တွေကို စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင့်လည်ချောင်းနဲ့ အာသီးမှာ မီးခိုးရောင် အလွှာထူထူ အုပ်ထားတာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဆုံဆို့နာ ရောဂါဖြစ်နေပြီလို့ ဆရာဝန်ကယူဆပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ရောဂါနောက်ကြောင်း ရာဇဝင်နဲ့ ခံစားရတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုလည်း မေးပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်ဆုံဆို့နာရောဂါ မှန်းသိရန်အသေချာဆုံး နည်းလမ်းကတော့အသားစယူ၍ အတည်ပြုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားစ ယူတယ်ဆိုတာ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အသားမျှင် နမူနာကိုယူပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းပို့၍ စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် သင့်မှာ ဆုံဆို့နာ ရောဂါပိုးရှိမရှိ သိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Diphtheria (ဆုံဆို့နာရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်ဟာ သင့်ရောဂါကိုအမြန်ဆုံး ကုသမှုခံယူ စေချင်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆုံဆို့နာရောဂါဆိုတာ အမှန်တော့ ဆိုးဝါးတဲ့ရောဂါတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးသင့်ကို ဆရာဝန်က အဆိပ်ဖြေဆေး ထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ဘက်တီးရီးယားပိုးက ထုတ်တဲ့အဆိပ်တွေကို တိုက်နိုင်အောင်ထိုးပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်တဲ့ လူနာတွေကို ဆရာဝန်တွေက များသောအားဖြင့် အဆိပ်ဖြေဆေး အနည်းငယ်သာ စထိုးပေးလေ့ရှိပြီး တဖြည်း
အဲဒီ နောက်မှာသင့်ဆရာဝန်က Erythromycin နဲ့ Penicillin လို ပိုးသတ်ဆေးတွေကိုလည်း သောက်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒါမှ ပိုးကိုသေချာရှင်းပစ် လို့ရမှာပါ။ ဒီလိုညွှန်ကြားပြီးတဲ့နောက် သင်နေပြန်ကောင်းလာတဲ့ အခါ
ဆုံဆို့နာပိုးကို တိုက်ဖို့ကိုယ်ခံအား တက်လာအောင် ကာကွယ်ဆေးကို ထပ်ထိုးပေးဖို့ ပြောလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ဆရာဝန်က သင့်ကိုဆေးပေးပြီး ဖြစ်လာမယ့် လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့ အပြင်ကိုရောဂါပိုးတွေ မကူးစက်စေဖို့ ဆေးရုံတက်ခိုင်းခြင်းဟာ ပုံမှန် ဖြစ်စဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဆုံဆို့နာရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ ထိတွေ့မိတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါ ဆရာဝန်ဆီသွားရောက် စစ်ဆေးပြီးကုသမှု ခံယူရမှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။
http://www.healthline.com/health/diphtheria#Overview1. Accessed June 12, 2016.
Diphtheria. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diphtheria/basics/symptoms/con- 20022303. Accessed June 12,
2016.http://www.healthline.com/health/diphtheria#Overview1. Accessed June 12, 2016.